Wada sheekaysiga fiidiyowga 2022
10 su'aalood oo ku saabsan sheekaysiga fiidiyaha
Xiriirku waa mid ka mid ah baahiyaha ugu waaweyn ee qofka casriga ah. Laakiin maalinta shaqada waxaa loo habeeyay qaab noocan ah inteena badan oo aan uga wada hadli karno taas oo kale, ka hadal tan kaliya fiidka, shaqada ka dib. Way adagtahay in la doorto xiriiriyaha. Ka dib oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad guriga uga baxdid meel uun. Iyo berrito mar kale in la shaqeeyo ama wax barto. Hadana dhibaatada cilaaqaadka ayaa wajaheysa qof casri ah: Waxaan rabaa, runtii waxaan rabaa inaan helo qof kawada shaqeeya oo aad uun ka “xujeysiin kartid” nolosha, inaad qof caajiso, qof ku amaano, ka wada hadal filimada cusub ama filimka ugu sareeya. Laakiin waqti isku mid ah waqti uma baxo in guriga laga baxo oo meel la iska wareego iyada oo ujeeddadu tahay in la hadlo uun. Hadana waxay umuuqataa inaysan jirin wado laga baxo. Laakiin ha quusan. Thanks to habka casriga ah iyo internetka awoodaha leh, qof walba maanta wuxuu heli karaa xiriiriyaha ugu fiican toos toos ah khadka tooska ah. Shabakada ayaa leh ilo badan oo isgaadhsiinta taas oo qofka casriga ahi aanu xitaa u baahnayn inuu ka fikiro bal inuu guriga ka tago. Waxaan rabaa inaan ka hadlo sheekaysiga fiidiyaha. Ama halkii, ka jawaab 10ka su'aalood ee ugu caansan ee ku saabsan sheekaysiga fiidiyaha. Marka, aan tagno:
1. Waa maxay 'VIDEOCHAT'?
Wada sheekaysiga fiidiyaha ee maanta ayaa ah aasaasi u muhiim wada xiriirka dadka kala duwan ee ka kala yimid wadamo kala duwan. Waxaa jira, dabcan, agabyo ku jihaysan hal luuqad gaar ah ama hal waddan oo gaar ah. Laakiin inta badan, kheyraadkani waa mid caalami ah. Halkan, dadku waxay ku wada xiriiraan iyagoo adeegsanaya kamarad fiidiyow ah. Xiriiriyayaashu way is arkaan oo maqlaan midba midka kale, sidaa daraadeed geedi socodka isgaarsiinta aad ayey u la mid tahay kulanka runta. Farqiga kaliya ayaa ah inaadan u baahnayn inaad ku daaweyso qof kasta oo shaah ah 8)
2. Muxuu yahay farqiga udhaxeeya 'VIDEO CHAPTER iyo ROULETTE' ee 'VAT' VAT fudud?
Waxaa jira dhowr nooc iyo noocyo sheekaysiga fiidiyowga ah. Waxaad si fudud u dooran kartaa xiriiriyaha oo aad bilaabi kartaa wadahadal. Adiguna waad u istcimaali kartaa ilaha wareysiga fiidiyowga fiidiyowga oo waxaad ka dhigi kartaa isgaarsiin aad iyo aad uga sii daran naftaada. Iyo xiriiriyaha, sidoo kale. Waa maxay xad dhaaf? Xaqiiqda oo ah in qofna uusan dooran doonin dhexgalka. Xiriiriyaha sheekaysiga waxaa lagu bixiyaa si kadis ah. Horey uma ogaan kartid waxkastoo ku saabsan qofka aad la xiriireyso daqiiqadaha soo socda (ama daqiiqado iyo xitaa saacadaha). Waxkasta waa halkan: doorashada iskuduwaha, waqtiga wada xiriirka, luqadda isgaarsiinta, mowduucyada isgaarsiinta iyo wixii la mid ah, sidaas oo kale, iwm. Tani waa soo jiidasho fiidiyowga fiidiyowga fiidiyaha ah oo loogu talagalay dadka badankood ee u taga halkaas kaliya si ay ula hadlaan
3. Yaa xubin ka noqon kara Wada Hadalka fiidiyaha ee fiidiyowga ah 'Roulette Video Chat'?
Xaqiiqdi, guud ahaan ma jiraan wax xayiraad ah. Dabcan, kaqeybgale ma noqon karo qof kayar da'da 18 sano. Sidaa darteed, haddii nin dhalinyaro ah ama gabar ah ay ka weyn yihiin 18 sano, markaa KU SOO DHAWOW.ChattRoulette-ka casriga ahi wuxuu bixiyaa noocyo badan oo isgaadhsiin ah. Tani waa isgaarsiinta qol caadi ah, iyo isgaarsiinta qarsoodiga ah, waxa loogu yeero isgaarsiinta gaarka loo leeyahay xiriiriyaha. Si kasta ha noqotee, kaqeybqaatahu wuxuu noqon karaa gabi ahaanba qof kasta oo 18 sano ka weyn. Gabi ahaanba ma jiraan wax xayiraad ah oo ku saabsan jinsiga, siyaasada iyo aragtida diinta, iyo xayiraadyo kale oo aan da'da ahayn. Sidaa darteed, dadka leh danaha kala duwan iyo heerarka horumarka ayaa halkan ku kulma. Waana mid aad u xiiso badan. Gaar ahaan markii aad ogtahay inaad hubaal tahay inaad wax badan u egtahay inaad aragto qofkan, gaar ahaan nolosha dhabta ah.
4. Bixisay mise bilaash?
Hawlaha badankood ee ku saabsan ka sheekaysiga fiidiyowga firaaqada ah gebi ahaanba waa bilaash. Laakiin sidoo kale waxaa jira dalabyo la bixiyay. Kuwani waa, sida caadiga ah, ikhtiyaaro dheeri ah oo aad dooran karto, ama aad dooran kartid inaadan ahayn. Intaa waxaa dheer, inta badan qaybta isgaarsiinta xorta ah ayaa ku filan. Sidaa darteed, aan ogaano waxa roulette lagu bixin doono bilaash iyadoo lagu wada sheekaynayo fiidiyaha, iyo waxa la bixinayo.
Waa kuwan sifooyinka bilaashka ah:
oo lala yeelanayo isuduwaha tooska ah
awooda diidmada lahadalka qof qaas ah
suurtagalnimada doorashada luuqadda isgaarsiinta iyo xiriiriyaha waddan kale ama magaalo cayiman
Oo halkan waxaa ah qaababka mushaharka:
Ku dar qof nasiib ah liiska wada-hawlgalayaasha isgaarsiinta caadiga ah
97 007 u gudub aag gaar ah oo war isgaarsiinta
ka helitaanka gunooyin gaar ah khayraadka si kor loogu qaado tayada wada xiriirka
Dabcan, waxaa jira dhibco dheeri ah oo ku saabsan isugeynta fiidiyowga fiidiyowga ah mid walba waxyar ayuu u kala duwanaan karaa Laakiin waxaan liis gareeyay qodobbada ugu muhiimsan.
5. Ka waran haddii dhex-dhexaadiyuhu uusan jeclayn?
Xaqiiqdii, maanta wax walba ayaa la sameeyaa si qof soo booqde kasta oo ka mid ah wareysiga fiidiyowga fiidiyowgu uu dareemo raaxo iyo kalsooni. Laakiin wali, maahan, dhammaan, ka fog dhammaan wada-hawlgalayaasha is-gaarsiinta, waan jeclaan karnaa. Wax kastaaba waa isku mid sida nolosha dhabta ah. Waan jecel nahay qof waxaanan sii wadaynaa inaan la xiriirayno qofkaas. Qofna nama habboona haba yaraatee, mana doonayo inaan la xiriiro qofkan. Laakiin haddii nolosha dhabta ah ay nagu adag tahay inaan diidno inaan la xiriirno kuwa aanan jeclayn, markaa khadka tooska ah way fududahay inaan gaarno waxaan rabno. Hadana haddii si lama filaan ah aadan u jeclaan qofka aad la hadlaysid, markaa waa arrin aad iyo aad u fudud in la damiyo. Tan waxaa lagu samayn karaa hal badhan oo loo yaqaan "kan ku xiga." Ingiriisiga, badhankan waxaa loo yaqaan: "ku xig". Waa ku filan tahay inaad riixdo batoonkaan, sida ugu dhakhsaha badan musharraxa xiga ee ku-meel-gaarka ah ayaa laguu soo bandhigi doonaa wada-xiriirka.
Dabcan, tani waa wax fudud oo fudud. Laakiin sidoo kale waxaad ubaahantahay inaad u diyaar garowdid xaqiiqda ah inaad adiga, dhexdhexaadiye ahaan, lagaa xiri karo. Adigana sidoo kale waad beddeli kartaa oo qof kale ku beddelan kartaa.Halkanna waxba kama qaban kartid, dhab ahaantii. Marka, hal badhan oo "xiga" iyo voila, waxaad horey u leedahay lammaane isgaarsiin oo ka duwan shaashadda kombiyuutarka hortiisa.
6. Waa maxay “wada xiriirka khaaska ah” iyo sida loo helo?
Kasta oo Chatt Roulette ah wuxuu leeyahay dhowr qol oo lagu sheekeysto. Laakiin waxaa jira laba kuwa waaweyn:
Qolka guud ee la wadaago waxaa loola jeedaa dhammaan meelaha kaydka leh. Oo halkan sharciyadu waa isku mid qof walba. Wadahadal kasta oo ka dhaca qolka la wadaago waa mid aan kala sooc lahayn. Nidaamka isgaarsiintuna si sax ah ayuu u socdaa ilaa mid ka mid ah kaqeybgaleyaasha howshan uu riixayo batoonka "xiga". Sida ugu dhakhsaha badan badhankan riixid (dhib ma leh cidda ay tahay), isgaarsiinta waa la joojinayaa.
Laakiin waxaa jira waxyaabo wanaagsan oo laga reebay qaanuunka guud. Waxay ku saleysan tahay xaqiiqda in qof walba, haddii la doonayo, uu marin u heli karo qol gaar ah. Qolka gaarka loo leeyahay waa goob gaar ah oo la ilaaliyo oo ku saabsan ilaha Kaydka ah ee Roulette, marka isgaarsiintu ay soconayso ilaa iyo inta aad rabto iyo hal daqiiqad ama adoo riixaya hal badhan, wada xiriirkaan lama joojin karo. Isgaarsiinta khaaska ah micnaheedu waa marka ugu horeysa ee wada xiriirka si gaar ah oo aan cid qalaad dhex gelin karin. Wadahadalkan, marka aad awoodid wax yar oo ka badan qolka caadiga ah. Waana war isgaarsiin gaar ah oo lagu bixiyo inta badan fiidiyowga sheekaysiga fiidiyowga. Si loogu martiqaado xiriiriyaha gaarka ah aaga isgaarsiinta khaaska ah, waxaa ku filan in lagu bixiyo isgaarsiintaan iyo voila, qolka waa furmi doonaa wadahadalkuna wuxuu sii socon doonaa xayiraad la'aan. Waa nooc ka mid ah isgaarsiinta khaaska ah ee soo jiidata inta badan booqdayaasha si ay ula sheekaysato fiidiyowga sheekaysiga fiidiyoowga.
Dabcan, xaddidaada qaar ayaa halkan ka jira, aagga isgaarsiinta khaaska ah. Laakiin inta badan, xayiraadahaan waa la akhrin karaa ka hor inta aan la bixin aaggan asturnaanta.
7. Maxaad ugu baahantahay inaad ku wada xiriirto Caymiska VAT VAT?
Isgaarsiinta, iyo wax kasta (xitaa khadka tooska ah) waxay u baahan yihiin qaab iyo ilo gaar ah. Haddii aan ka wada hadalno isgaarsiinta qadka wadahadalka fiidiyowga, ka dib waxaan ubaahanahay shuruudo gaar ah oo loogu talagalay lacagaha. Xaqiiqdii, ku dhawaad ​​qofkasta oo casri ah si fudud ayuu ugu tagi karaa websaydhka 'Videochat Roulette' oo wuxuu bilaabi karaa inuu la xiriiro qofkasta oo aan sugneyn.
Marka, waa kuwan, shuruudaha ugu yar ee waxa aad ugu baahan tahay inaad kuwada sheekeysato ChatRoulette:
kombiyuutar leh awood ku filan oo lagu qabto kulan qaab video ah
makarafoon tayo fiican leh
Mabda 'ahaan, tan ayaa ah waxa loo baahan yahay oo dhan si looga wada hadlo kheyraadkan. Caadi ahaan, shuruudaha makarafoonka iyo kambuyuutarada websaydhka xitaa waa in laga badiyaa. Makarafoonku waa inuu ahaadaa mid tayo sare leh.Makarafoon wanaagsan ayaa ah nooc ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee wada-xiriirka guuleysta.
Kamaradaha webka sidoo kale waa qodob muhiim ah. Kameeyaha wanaagsan ayaa ah inay fududeeyaan wareejinta sawirrada iyo fiidiyowyada oo aan tartiib tartiib loo gaarin. Waxba ma aha inay farageliyaan isgaarsiinta dadka ee labada dhinac kaamirada.
Dabcan dabiiciga ah, kombiyuutarka laftiisa waa inuu noqdaa mid awood leh oo ku filan si aysan wax u gaabin. Markaa inaysan waxba carqaladeyn isgaadhsiinta.
8. Ma u dejin karaa shuruudaha raadinta dhexdhaxalaha?
Ku sheekaysiga fiidiyowga fiidiyowga ah, ugu horreyntii, waa madadaalo madadaalo leh. Sidaa darteed, maahan wax qarsoon in soo booqde kasta oo halkan yimaad ujeeddadiisu tahay inuu madadaaliyo oo uu la sheekaysto dadka kale ee xiisaha leh. Xulashada aan kala sooca lahayn ee lamaanaha isgaarsiinta sidoo kale waa wax aad u xiiso badan. Laakiin marmarka qaarkood waxaan rabaa inaan la hadlo, inkasta oo aan la wadaago lama huraan, laakiin leh cabirrada isgaadhsiinta qaarkood. Sidaa darteed, milkiilayaasha iyo horumariyeyaashu waxay isku dayayaan wax walba oo suurta gal ah sidaa darteed soo booqde kasta oo ka mid ah fiidiyowga wada sheekaysiga fiidiyowgu wuxuu la xiriiri karaa isagoon wax dhibaato ah kala imaanin qofkasta, laakiin ogaada cidda loo soo bandhigi doono inuu yahay dhex-dhexaadiye. Ugu yaraan qiyaastii. On kheyraadka ugu badan ee loogu talagalay barnaamijka sheekaysiga fiidiyowga ee fiidiyowga maanta waxaad dooran kartaa wada-hawlgalayaasha iyada oo la raacayo cabbirrada soo socota:
Waa xuduudahan loo soo jeediyay in la doorto, sida ay yiraahdaan, dhexgalka iskiis. Oo booqde kasta oo ka mid ah wada sheekaysiga fiidiyowga fiidiyowga ama midkood wuxuu ka faa'iidaysan karaa xaqa uu u leeyahay inuu doorto ama si fudud u iloobo oo uu bilaabo xiriir run ah oo qiiro leh oo firfircoon.
9. Waa maxay sababta mamnuucida qoob-ka-ciyaarka lagu dhex-sheekeysto fiidiyowga?
In kasta oo xaqiiqda ah in fiidiyowga sheekaysiga fiidiyowga loo sameeyay wada xiriirka ka dhexeeya dadka, had iyo jeer waxaa jira khatar ah in la mamnuuco. Aynu aragno waxa saxda ah ee booqde kasta oo khayraadkan cajiibka ah laga mamnuuci karo. Asal ahaan, ka mamnuuci dadka isticmaala ku xadgudba mamnuucyada soo socda:
aflagaado nooc kasta oo sharaf iyo sharaf ah oo qofka ah. Guud ahaan, cayda kasta waxay u horseedi kartaa xayiraad. Sidaa daraadeed, aasaaska wada xiriirka kasta oo ku saabsan ilahaan waa xushmad iyo is ixtiraam.
xayeysiinta waxkasta. Xayeysiinta waa mamnuuc. Taasina waa sax. Ka dib oo dhan, goobta ayaa loo sameeyay si dadku u wada hadlaan oo fikradahooda u beddelaan, oo ayan dhageysanin xayeysiinta wax soo saarka ama adeegga.
fadeexad la'aan ogolaansho la'aan iyo kaliya aag gaar ah.
spam sidoo kale waa mamnuuc. Weli, waxaan u maleynayaa in qofna uusan jeclaan doonin haddii ay u adeegsadaan uun madal loogu talagalay spam.Mamnuucistu waa sahlan yihiin oo toosan. Haddii xiriiriyahaagu uu iyaga ku xad gudbo taas oo kaa hor istaagaysa inaad ku raaxaysato wada xiriirka, markaa waxaad had iyo jeer uga caban kartaa arinta mashruuca maamulaha. Tallaabooyinka ayaa si dhakhso leh loo qaadi doonaa. Run, haddii ay jirto hal cabasho, markaa ganaax deg deg ah ma raaci doono. Laakiin digniin ayaa loo baahan doonaa. Haddii ay jiraan cabashooyin kala duwan oo ka imanaya dad kaladuwan, markaa xannibaadda ayaa noqon karta mid dhakhso ah oo aan digniin laga helin.
10. Kumaa ka faa iidaysan kara QAYBTA CUTUBKA ROULETTE?
Adduunyada casriga ah, dadka intiisa badani aad iyo aad bay ugu kooban yihiin isgaadhsiinta. Sidaa darteed, kheyraadka sida fiidiyowga sheekaysiga fiidiyowgu ma noqon karo oo keliya hab lagu raaxeysto, laakiin sidoo kale meel tababar. Ayaa loogu talagalay Dad badan, dad badan. Tusaale ahaan, agabkani wuxuu waxtar u yeelan karaa dadka soo socda:
loogu talagalay kuwa ka xishooda la xiriirka dadka nolosha dhabta ah.
loogu talagalay kuwa ay ku adag tahay inay diidaan codsi dadka. Halkan waxaad ku baran kartaa sida ugu horraysa ee loo jeediyo qof kale. Laakiin tani sidoo kale waa khatar. Runtii, nolosha dhabta ah, kama joojin kartid qof oo joojin kartid wadahadalka qeyb labaad.
loogu talagalay kuwa raadinaya qof rafiiq naftiisa ama kaliya barta inay la xiriiraan jinsi ka soo horjeedda.
waa u fududahay kuwa jecel iyo la xiriirka dadka.
Markaa, waxkastoo qof ayaa dhihi kara, ChattRoulette wuxuu had iyo jeer ku raaxeysan doonaa ixtiraam aad uqurux badan dadka badan ee meeraheena cajiibka ah. Taasina waa wanaagsan tahay. Taas macnaheedu waa in dadku ay weli xiiseynayaan inay xiriir toos ah la yeeshaan noocyadooda.